OS တွေကိုစိတ်ကြိုက် စမ်းသပ်လေ့လာချင်သူတွေအတွက်....... [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > Computing Engineering > Operating System > OS တွေကိုစိတ်ကြိုက် စမ်းသပ်လေ့လာချင်သူတွေအတွက်.......
View Full Version : OS တွေကိုစိတ်ကြိုက် စမ်းသပ်လေ့လာချင်သူတွေအတွက်.......
ဘယ်သူမဆိုစမ်းသပ်ချင်ချတယ်.... stable ကျနေတဲ့ ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ widnow ကြီးကို ဖျက်ပြီး အခြား os တင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ်ရဲ့ window ပေါ်မှာ စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးလေ့လာလို့ရအောင် ကြိုက်တဲ့ os တင် ပြီးစပ်းသပ်လို့ရတယ် အဲ့ဒါက VMwre software လေးပေါ့ သိပြီးသားဆိုရင်တော့ (ဟဲဟဲ) ကျွန်တော်ကတော့ linux ကိုရော window 2003 server ကိုရော အဲ့ဒီမှာ Run ပြီး အသုံးပြုတယ် network လည်းချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တယ် ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ os လေးကို အလွယ်တကူဟိုရွေ့ဒီရွေ့ သယ်ပြီး အသုံးပြုလို့ရတယ် တော်တော်လေးတော့အသုံးဝင်တဲ့ software လေးပေါ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်လေးပေါ့ software လေးကိုပေးချင်ပါသော်လည်း အခုလောလောဆယ်တော့ dial-up နဲ့အသုံးပြုတဲ့အတွက် အဆင်မပြေသေးလို့ နောက်အဆင်ပြေမှတင်ပေးလိုက်ပါမယ်....
စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ ရရင်ပေးပါဦး ကိုလင်းရေ
ကျွန်တော်က software ဆို အသေအလဲကြိုက်တယ်ခင်ဗျ
အစ်ကိုတို့ ကူညီကြပါနော်..ညီလေးက မြန်မာဖောင့်မရလို့ပါနော်.. ;D ;D :D
ပြောရမှာအားနာပေမယ့် ကိုyekhant ရဲ့ ရေးသားချက်တွေကို ဖတ်မယ့်သူတွေကို လေးစားသောအားဖြင့် ဘားဂလိကို နောင်အကြိမ်များတွင် အသုံးမပြုပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။လူတိုင်း ဘားဂလိကို ဖတ်တတ်ချင်မှာ ဖတ်တတ်မှာပါ။သို့အတွက်ကြောင့်ပါ။
ရေးလာသမျှ ဘားဂလိတွေကို ကျွန်တော်လည်း ပြန်လိုက်မပေးနိုင်လို့ပါ။
လောလောဆယ်တော့ ပြန်စာရေးလိုတယ်ဆိုရင် ဘယ်ဖက်အောက်ထောင့်မှာ မြန်မာကီးဘုတ်ဆိုတာကို ကလစ်ပြီး မိမိရိုက်လိုတဲ့ စကားလုံးကို တစ်လုံးချင်းလိုက် ကလစ်ပြီး ပို့စ်များရေးသားနိုင်ပါတယ်။
vMware Workstation ကို အောက်ကလင့်မှာ ကျနော်တင်ထားတာ ရှိပါတယ် ..
ကျွန်တော် တရုတ် XP Window ကို window ဖြုတ်မချပဲEnglish လိုပြောင်းချင်တာ။
can i use it in window vista? ::)
civil softwares ... Staad, sap or etabs ၂ခုလောက် install လုပ်ပြီး သုံးချင်ရင်
window xp နဲ့ vista ဘယ် os က ပို၍သင့်တော့်် ပါသလဲ ခင်ဗျာ။
ကျနော် Staad Pro ကိုတော့ မသုံးဖြစ်လို့မပြောတတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ... SAP2000 တို့ ၊ ETABS တို့ ၊ SAFE တို့ ကတော့ ... Window XP နဲ့ VISTA OS ၂ ခုစလုံးမှာ အဆင်ပြေပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုချစ် :4:
က္ပျန်တော် တို့ကတော့် cracked ပြီးသား SW လေးတ္ပေသာ သူံး နိုင်သူမို့ :P
vista မှာအဆင်မလားလို့ မေးကြည့် တာပါ
က္ပျန်တော် တို့ကတော့် ခရက်ed ပြီးသား SW လေးတ္ပေသာ သူံး နိုင်သူမို့ :P
ဘ၀သူတွေပါဘဲဗျာ ... :2:
Window XP မှာတုန်းကတော့ ဘာမှ ထူးပြီးမလုပ်ပေးရပေမယ့် ...
Vista မှာတော့ .... Control Panel အောက်ထဲက User Account ထဲမှာ .... User Account Control (UAC) ကို OFF (ပိတ်) ထားရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
အဲဒီ VMwre ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရလည်ဆိုတာ
VM Ware ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရတာလည်း ဆိုရင်တော့ ...
လက်ရှိ တင်ထားတဲ့OS ပေါ်မှာပဲ VM ware Software ကို Run ပြီးတော့ နောက် မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့OS တစ်ခုကို ထပ်ခေါ်ပြီး အသုံးပြုရခြင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ..
(ဥပမာ .. မိမိအသုံးပြုတဲ့OS က W-7 ဆိုပါတော့ .... ဒါပင်မယ့် မိမိအလုပ်အတွက် အသုံးပြုမည့် ဆော့ဝဲက XP မှာပဲ သုံးလို့ ရတယ် W-7 မှာ အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် မိမိကွန်ပျူတာကို OS ပြန်ပြောင်းစရာ မလိုပဲ W-7 မှာ VM Ware ကိုအသုံးပြုပြီး XP OS ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ..)
ဒါကတော့ အကြမ်းဖျဉ်း ပြောပြတာပါ ... VM ware ကိုအသုံးပြုပြီး OS နှစ်ခု သုံးခုထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ...
မိမိကွန်ပျူတာ Processor အမျိုးအစား RAM အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး အသုံးပြုနိင်ပါတယ်။
VM Ware မှာ network ချိတ်ခြင်း အပိုင်းကိုတော့ ဒီ Topic မှာ သွားရောက်လေ့လာ နိုင်ပါတယ် ..
VM Ware ပေါ်မှာ virtual os တွေ network ချိတ်ခြင်း (http://myanmarengineer.org/forums/showthread.php?4151-VM-Ware-%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC-virtual-os-%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC-network-%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8&highlight=ware)
installer ကိုတော့ ဒီနေရာကနေ (http://download1us.softpedia.com/dl/dfc636891a736373c2ebe9586ff11bc6/4d28794e/100005341/software/system/vmware/VMware-workstation-full-7.1.3-324285.exe)ဒေါင်းလိုက်ပါ....
ကီးကိုတော့ ဒီကနေ (http://www.mediafire.com/?c05biqi3rqac86p)ဒေါင်းလိုက်ပါ...
အစ်ကိုရေ download မရဖြစ်နေလို့ တစ်ချက်ပြန် စစ်ဆေးပေးပါအုံးနော။
ကိုချင်းတွင်းသား တင်ပေးထားတာကိုပဲ ကျွန်တော် Upload ပြန်တင်ပေးထားပါတယ် ..
ပထမ link က 380 byte file ဘဲ ရှိတယ်။ တခုခုများမှားနေသလား။ ဒုတိယ link ကတော့ ကောင်းပါတယ်။
ဟုတ်တယ် ကိုကြီးဆွေရေ ...
ကျွန်တော်လည်း ပြန်မစစ်မိလိုက်ဘူး ..
ကိုချင်းတွင်းသားတင်ပေးထားတဲ့ လင့်ကို ဒေါင်းပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်တာ ..
(စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီလောက် မီဂါဘိုက် မနည်းဘူးဆိုပြီး ထင်တော့ ထင်မိသား ..:confuseds: )
ကျွန်တော် ထပ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...
ဒီနေရာလေးမှာလည်း ကိုဖိုးလပြည့်ကြီး တင်ပေးထားပါတယ် ..
ကျွန်တော်က အားလုံးကို upload လုပ်ရင် ပြသနာမဖြစ်ဘူး...
ဒါပေမယ့်ပြန်ဒေါင်းမယ့်သူတွေ အဆင်မပြေမှာစိုးလို့... installer ကို uploading လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့... softpedia ကလင့်ကို ကူးပြီး ကီးကိုပဲ mediafire ကနေတင်ပေးလိုက်တာပါ...
ဖိုင်ဆိုဒ်က ၅၇၀MB ကျော်နေလို့ ဒေါင်းတာအဆင်မပြေရင် google ကနေ installer ကိုရှာလိုက်ပြီး အဆင်ပြေရာ ဆိုဒ်ကနေဒေါင်းလိုက်ပါ...
ကီးဖိုင်ကိုဒေါင်းလို့အဆင်မပြေရင်ပြောပါ.... လင့်ချိန်းပေးပါမယ်... ဒေါင်းလို့အဆင်ပြေမယ့်ဆိုဒ်ကိုပြောရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့....
နောက်ထပ်ဆော့ဝဲတစ်ခုနဲ့ လဲစမ်းလို့ ရပါတယ်။ နာမည်ကတော့ Virtualbox လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ခရက်လုပ်စရာမလို ကီးထည့်စရာမလိုဘဲ ဖရီးသုံးနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။
လိုချင်ရင်တော့အောက်ကလင့်ကနေ သက်ဆိုင်ရာ installer ကိုဒေါင်းပါ။